SUBWAY® 14.0.0.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 14.0.0.0 လြန္ခဲ့ေသာ3ရက္က
Application မ်ား စားစရာ & ေသာက္စရာ SUBWAY®
SUBWAY® ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဆာလောင်မွတ်သိပ်? အဆိုပါSUBWAY® App ကိုနှင့်အတူသငျသညျ, Express ကို Pickup ဝင်ရောက်ဖို့ရှေ့ဆက်အမိန့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကူပွန်ရဝယ်ယူမှုအပေါ်ဝင်ငွေရ, ပေးဆပ်နှင့်ပိုပြီးမှစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်သည် - စက္ကန့်အတွင်းပါ!
ဝင်ငွေရရှိမှု: ညာဘက် app ကိုသို့ built မြေအောက် MyWay ™ဆုလာဘ်များနှင့်အတူ, သင်တိုင်းဝယ်ယူအပေါ်ဝင်ငွေပေါင်းအံ့အားသင့်စရာဆုလာဘ်များ, အထူးသီးသန့်သဘောတူညီမှုနှင့်ပိုပြီးရနိုင်။ ဒါကြောင့်သင်တို့အတွက်ကြောင့်ငါတို့သည်လေးမွတျ၏ "လက္ခဏာသက်သေ" စဉ်းစားကြည့်ပါ!
သိမ်းဆည်းပါ: ဒစ်ဂျစ်တယ်အပေးအယူပဲသင်တို့အဘို့ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်သင့်ရဲ့ app ကိုစလှေတျ Get ။
Customize: အပိုသံလွင်လိုပဲ? အရမ်းကျွန်တော်တို့ကို။ ကိုယ့်ကိုသင်စားသောက်ဆိုင်မှာအလိုတခုတည်းကဲ့သို့သင်တို့အသားညှပ်ပေါင်မုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ပေါင်မုန့် toasted, သင့် toppings ကောက်, သင့်ဒိန်ခဲဖလှယ်ရန် - အခွင့်အလမ်းများအဆုံးမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
အိုင်တီ OFF Top: သင်၏သားညှပ်ပေါင်မုရန်ကိုထည့်သွင်းဖို့အဘယ်အရာကိုသေချာမဟုတ်ဘူးလား? ပညာရှင်တွေရဲ့ကချန်ထားပါ။ သင့်ရဲ့အိတ်ကိုတိုက်ရိုက်အကြံပြု toppings နှင့်အတူတစ်သားညှပ်ပေါင်မု Add - အနိမ့်ပေမယ့်အရသာမြင့်မားသောဆုံးဖြတ်ချက်များစောင့်ရှောက်ခြင်း။
တစ်ဦးက FAVE သိမ်းဆည်းပါ:a"ကိုခါတိုင်းလို" ရှိပါသလား? အတိတ်အမိန့်မှတဆင့်တူးအချိန်မဖြုန်းတီးပါနဲ့။ အမည်နှင့်လျှပ်တပြက်ပြန်လည်နေရာချထားစေရန်သင့် fave သိမ်းဆည်းပါ။
လစာ: အဘယ်သူမျှမပိုက်ဆံအိတ်? ပြဿနာမရှိပါဘူး။ သင့်မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်သုံးပြီး App ကိုမှတဆင့်သို့မဟုတ် In-store ကိုရှေ့ဆက်အချိန်ကိုသင်၏အစာအဘို့ပေးဆောင်။
FIND: တွင်-The-go? ငါတို့သည်သင်တို့တယ်။ သငျသညျအနီးSUBWAY®စားသောက်ဆိုင်ကိုရှာပါ, လမ်းညွှန်ချက်များအရ, နာရီနှင့်သင်သိချင်သောအခြားအရာရှုမြင် - စားသောက်ဆိုင် thru တစ် drive ကိုရှိပါတယ်သို့မဟုတ်နံနက်စာတာဝန်ထမ်းဆောင်လျှင်လိုပဲ။
မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? ယင်း App ကို Download လုပ်ပါနှင့်အစာစားခြင်းနှင့်ဝင်ငွေကိုစတင်ရန်!
မည်သည့်မေးခွန်းများကိုအဘို့, သင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်နိုင်သည် AppFeedback@subway.com
SUBWAY®မြေအောက်အိုင်ပီ LLC ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါသည်
© 2019 မြေအောက်ရထားအိုင်ပီ LLC All Rights Reserved
မြေအောက်ရထားစာဆိုင်များက်ဘ်ဆိုက်ကိုSUBWAY® App ကိုပံ့ပိုးမှုလျှောက်လွှာ License Agreement ကို
SUBWAY® အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
SUBWAY® အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
SUBWAY® အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
SUBWAY® အား အခ်က္ျပပါ
SUBWAY® ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း SUBWAY® အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 14.0.0.0
ထုတ်လုပ်သူ SUBWAY Restaurants
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.subway.com/en-us/legal/privacynotice
App Name: SUBWAY®
Release date: 2019-08-14 01:56:47
လက်မှတ် SHA1: 06:3C:05:5F:17:0D:9D:D4:3E:61:6D:CB:F1:5C:C6:59:DC:32:4F:91
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Subway
အဖွဲ့အစည်း (O): Doctor's Associates Inc.
နယ်မြေ (L): Milford
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): CT
SUBWAY® APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ